Huawei C8500 မှာ game နဲ့ App တွေကို SD card ထဲပြောင်ချင်ရင်ဘယ်လိုပြောင်းရလဲသိချင်လို — MYSTERY ZILLION
Huawei C8500 မှာ game နဲ့ App တွေကို SD card ထဲပြောင်ချင်ရင်ဘယ်လိုပြောင်းရလဲသိချင်လို
Huawei C8500 မှာ game နဲ့ App တွေကို SD card ထဲပြောင်ချင်ရင်ဘယ်လိုပြောင်းရလဲသိချင်လို့
ကျွန်တော်သိတဲ့ app က app2sd ကို install လုပ်ပြီးပြောင်းလို့ရတယ်လို့တော့ သိတယ်
ဒါပေမဲ့ ကျွန်တော့့်မှာ ရှိတဲ့ app2sd ကို install လုပ်လို့မရဘူးဖြစ်နေတယ်
ကျနော်လဲမရဘူးဖြစ်နေတယ်. Android 2.1 ဆိုမရဘူးလို.ပြောတယ်.Android 2.2 and above ပဲရတယ်လို.ရေးထားတယ်။
only supports 2.2 (Froyo) or above
app2sd v 1.6 တော့ရှိတယ်၊ install လုပ်လို့လဲရတယ်၊ ဒါပေမဲ့သုံးလုံးမရဘူးဖြစ်နေတယ်၊
ကျွန်တော့်လဲ အဲ့လိူဖြစ်တယ်ဗျ ကျွန်တော့်ဖုန်းလဲ ဗားရှင်း ၂.၁ ပဲဗျ
ခုတော့အဆင်ပြေသွားပါပြီ appsaver ဆိုတဲ့ဆော့၀ဲနဲ့ပါ
ကျွန်တော့်ကို dragon virus ဆိုတဲ့ သူငယ်ချင်းတင်ပေးတာပါ
minlet wrote: »
မရှင်းလို့မေးမယ်နော်...appsaver ကိုသုံးတော့ install လုပ်ပြီးသား app တွေကို SD card ပေါ် copy လုပ်တာနော်။ install path ကို SD ပေါ်ရွှေ့တာမဟုတ်ဘူးလို့ထင်လို့ပါ။ကျနော်များလိုနေသလားလို့ပါ။
ဒါ လေးစမ်း ကြည့်ပါလား ..
ဟုတ်တယ် .. appsaver က apk file ထုတ်တဲ့ဟာ ကြီး .. အဲတုန်းကမစမ်းကြည့် ပဲတင်ပေးလိုက်တာ .. သေချာမကြည့်မိလိုက်ဘူး ..
Link2SD ဆိုတဲ့ ဆော့ဝဲကို သုံးနိုင်ပါတယ်။ အသေးစိတ်ကို ပို့စ်တစ်ခုနဲ့ထပ်ပြီး ဖော်ပြပေးသွားပါမယ်။<br>
root လုပ်ပြီးသားဖုန်း ဟုတ်တယ်မဟုတ်ဘူးကို ဘယ်လိုသိနိုင်မလဲ၊
root လုပ်ပြီးသားဖုန်း ဟုတ်တယ်မဟုတ်ဘူးကို ဘယ်လိုသိနိုင်မလဲ၊ <br>
root လုပ်ပြီးမှသုံးလို့ ရမယ့် application တစ်ခုခု ကို install လုပ် ပြီး run ကြည့် ပေါ့ .. eg. font changer တို့ ဘာတို့ ပေါ့ အများကြီးရှိပါတယ် .. တစ်ခုခုပေါ့ .. run လိုက်လို့ ဒီ appliction ကို run ဖို့ root လုပ် ဖို့လိုပါတယ် တို့ ဘာတို့ပြောရင် root မလုပ်ရသေးလို့ ပေါ့ .. run လို့ okay သွား တယ်ဆိုရင် တော့ root လုပ်ပြီးသားဖြစ်လိမ့် မယ် ... <br><br>ကိုယ်တိုင်သုံးနေတဲ့ဖုန်းက root မလုပ်ရသေးတဲ့အတွက်သိပ်တော့မသိဘူး .. အမှားပါရင်ခွင့် လွှတ်ကြပါ .. <br>